Kenya oo ku eedeysay Al-Shabaab qaraxyadii Nairobi ee dhimashada & dhaawaca dhaliyey – SBC
Kenya oo ku eedeysay Al-Shabaab qaraxyadii Nairobi ee dhimashada & dhaawaca dhaliyey
Saraakiil ka tirsan dawlada Kenya ayaa ku eedeeyey xarakada Al-Shabaab inay masuul ka yihiin qaraxyadii xaley ka dhacay magaalada Nairobi ee caasimada wadanka Kenya, kuwaasi oo ku geeriyoodeen 6 qof halka 40 kale oo qaarkood qaba dhaawacyo halis ah ay ku geeriyoodeen qaraxyadaasi.
Ku xigeenka afhayeenka ciidamada Booliiska Kenya ayaa sheegay in ay ka soo xigteen dad goobjoogayaal ah in baabuur goobta qaraxa mareyey ay dad ka soo tuureen bambooyin, iyadoo baabuurkii uu baxsadey, waxaase uu sheegay in tuhunka ugu weyn ee qayaan uu yahay in Al-Shabaab ka dambeeyaan qaraxyada ama dad kale oo qalbiga ka jecel.
“Tani waa fal amxaqnimo ah oo ay ka dambeeyaan nabadiidka Al-Shabaab” ayuu ku yiri saxafiyiinta mar uu la hadlayey afhayeenka ciidamada Booliiska Kenya Charles Owino.
Qaraxyadan ka dhacay goobta basaska laga raaco ee magaalada Nairobi ayaa ah kuwii sadexaad ee nuucooda ah oo ka dhaca magaalada Naiorbi tan iyo markii Kenya duulaanka ku qaaday gudaha Soomaaliya kaasi oo ay sheegtey inay kula dagaalamayso xoogaga Shabaabka.
Inkastoo xarakada Al-Shabaab aanay wali ka hadlin qaraxan, ama aanay jirin cid sheegatey hadana Idaacad ku hadasha afka Shabaabka oo Muqdisho laga dhageysto ayaa qaraxaasi aad uga hadashay muujisayna sida ay ugu faraxsan tahay.
Madaxweyne kuxigeenka Kenya’ Kalonzo Musyoka, oo Isbitaalka ku booqdey dadkii dhaawacyada ahaa ayaa niyada ugu qaboojiyey inay isdajiyaan, balse wuxuu xusey in aan iyaga (Kenya) aanay noqon doonin kuwa la jibiyo.